Misy resaka anarana ihany koa no anton’ireo fifandirana iraisampirenena: Ny raharaha ao Nagorno-Karabakh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2020 13:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Қазақша, русский, Nederlands, polski, українська, Ўзбекча, Esperanto , Ελληνικά, 日本語, English
Sarin'ny tendrombohitra Nagorno-Karabakh. Wikipedia, saripika avy amin'i Sonashen, nampiasàna lisansa CC BY-SA 3.0
Ny 27 Septambra, nanomboka ady mitam-piadiana indray ireo firenena roa ao Azerbaijàna sy Armenia, ao amin'ny faritra Kaokazy Atsimo, izay niteraka fahafatesana miaramila sy sivily avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ny tena anton'ilay fifandonana dia ny fifehezana faritra iray antsoina hoe Nagorno-Karabakh amin'ny fiteny anglisy (faritra eo anelanelan'ireo firenena roa ireo), izay nodidian'ny lalàna iraisampirenena ho an'i Azebaidjàna ny ampahany, saingy nanomboka tamin'ny 1994 teo lasa teo ambany fifehezan'ireo nanambara tena ho manampahefana avy amin'ny foko Armeniniàna.
Ilay faritra ivon'ilay fifandonana mitoetra ho tsy mbola ahitàna vahaolana efa ho taompolo telo dia faritra iray an-tendrombohitra izay efa an-jato taona maro no misy mponina avy amina fiaviana isankarazany miara-monina.: Armeniàna kristiàna sy ireo Azerbaijàna shiita ny ankamaroany, fa misy ireo vondrona hafa ihany koa, toy ny Rosiàna, Kiorda ary Grika.
Toy ny any amin'ireo faritra rehetra onenana mponina avy amina firenena mampiasa fiteny samihafa, raha ity tranga eto ity, ny Azerbaijanis mampiasa ny fiteny Tiorka, ny Azerbaijani, ary ny Armeniàna mampiasa ny fiteny Indo-Eorôpeana, Armeniana, midika zavatra betsaka noho izay anarana hafa ny anarana ara-jeografika. Etsy ankilany, efa nisy fotoana teo ambany fitantanana pôlitikan'ireo Ampira mpanjanaka isankarazany ilay faritra, izay nitondra koa ny fiteniny hanampy tamin'ny fanomezana anarana ireo fikambanana isankarazany, raha ny tranga eto dia ny Rosiàna, ny Tiorka ary ny Persiàna.
Ny anarana amin'ny fiteny anglisy be mpampiasa indrindra dia ny Nagorno-Karabakh, izay fifangaroana teny rosiàna, tiorka ary persiàna. Ny tapany voalohany, ‘Nagorno-’ na ‘Нагорно-‘ amin'ny teny rosiàna dia midika ara-bakiteny hoe “tendrombohitra”, manondro ny toetra ara-jeografikan'ilay faritra. Ny Karabakh dia ny teny anglisy fitambaran'ny fiteny tiorka, ‘kara’ izay midika hoe ‘mainty’, sy ny “bağ”, izay midika hoe “zaridaina”, nefa koa teny iray manana fiaviana persiàna ampiasaina betsaka ao anatin'ny fiteny tiorka.
Ny teny hoe “Nagorno-Karabakh” dia avy amin'ny anaram-pitantanana sôvietika, ny Faritra Mizakatena Nagorno-Karabakh, amin'ny fiteny rosiàna “Нагорно-Карабахская автономная область” izay noforonina tamin'ny 1923. Io vondrom-pitantanana io dia nandrakotra tamin'ny ampahany izay nantsointsika tamin'ny fiteny rosiàna hoe Karabakh Be Tendrombohitra, Нагорный Карабах.
Amin'ny fiteny Azerbaijani, ny tena fampiasa matetika ho entina mamaritra ilay faritra dia ilay soratana hoe ‘Qarabağ’. Amin'ny fiteny anglisy, teny roa no ampiasaina ho famaritana ny vahoaka sy ny fiteny ao: Azerbaijani sy Azeri, fa ny hoe Azerbaijani no mahazo vàhana kokoa satria ofisialy kokoa sy feno fanajàna.
Amin'ny fiteny Armeniàna, misy teny roa entina manondro ilay faritra. Ny iray dia ny Ղարաբաղ, izay vakiana hoe Gharabagh, ary fanondroana iray ho an'ny anarana ara-tantaran'ilay faritra nampiasaina tamin'ny fiteny Azerbaijani. Ny iray hafa nampiasaina dia ny Արցախ, izay mahazatra ny mandika azy amin'ny fiteny anglisy ho Artsakh, izay ireo nilaza ny tenany ho manampahefana nifehy ara-pôlitika sy ara-tafika ilay faritra no nampiroborobo azy, tamin'ny fampiasàna ny anarana hoe Ny Repoblikan'i Artsakh. Ny Repoblikan'i Artsakh dia faritra telo hafa tsy mbola manana anarana no efa nankato ny fisiany, Transnistria, Ossetia Atsimo sy Abkhazia. Tsy nankatò azy io tamin'ny fomba ara-dalàna i Armenia, saingy manome fanohanana ara-pôlitika, toekarena ary ara-tafika ho an'ireo manampahefana Artsakh, ary nanambara fa ho ekeny izy io raha toa ka mihombo sy lasa lavitra ny fifandirana.
Ny fisiana anarana roa koa dia mihatra amin'ny renivohitr'ilay faritra, izay antsoina hoe Ստեփանակերտ amin'ny fiteny Armeniàna, adika amin'ny fiteny anglisy ho Stepanakert. Mba hanomezana voninahitra ny Armeniàna Bolchevik iray maherifo, Stepan Shaumian, tamin'ny 1923 io anarana io no nankatoavin'ireo Sôvietika manampahefana. Amin'ny fiteny Azerbaijani, fantatra amin'ny anarana hoe Xankəndi io tanàna io, soratana matetika hoe Khankendi amin'ny fiteny anglisy.